Ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa Baledweyne oo loo xiray astaanta iyo koofiyadda AMISOM (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baledweyne – Mareeg.com: Ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Baledweyne ee xarrunta gobolka Hiiraan ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray ciidanka AMISOM, iyadoo loo xiray astaanta iyo koofiyadda ciidamadaas.
Xaflad lagu qabtay Xarunta Ceeljaale ee duleedka magaalada Baledweyne ayaa ciidanka Itoobiya ee ku sugan gobolka Hiiraan waxaa loo xiray dareeska iyo astaanta lagu yaqaanno ciidanka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
Xafladda waxaa ka qeyb-galay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidanka Soomaalida iyo kuwa AMISOM iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Taliyaha ciidanka AMISOM ee Waaxda 4-aad, Kornayl Cabdiraxmaan Cabdi oo ka hadlay munaasabadda ayaa soo dhoweeyay ku biirista ciidanka Itoobiya ee howlgalka AMISOM, isagoo dhinaca kalena uga digay Al-Shabaab inay ku sii sugnaato gobollada Hiiraan iyo Galgaduud.
Taliye xigeenka waaxda 4aad ee Ciidamada AMISOM ee Gobolada Hiiraan iyo Galgaduud Kornayl Maariya, waxaana uu sheegay in ay ku faraxsanyihiin ku biirirsta Ciidamada Ethiopia Howlgalka AMISOM, isagoo Carabka ku adkeeyay in dhawaan Howlgal lagu cirib tiri doono Shabaab lagu fulin doono Gobolka, kana codsaday Maamulka iyo Bulshada inay gacan buuxda ku siiyaan.
Maxamed Ibraahim Sanbuur oo ah ku simaha guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ka codsaday dowladda Itoobiya iyo AMISOM inay qalabeeyaan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Hiiraan.
Baledweyne waxaa horay u joogay ciidamo ilaa 1000 askari ah oo ka socday Jamhuuriyadda Jabuuti, kuwaasoo qeyb ka ahaa howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.